Igumbi leMountain View kuMbindi 1850 Ekhaya
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguJoseph
Igumbi lokulala elikhulu kumgangatho wesibini kunye nokumkanikazi, ibhedi ephindwe kabini kunye nesofa. Igumbi lesidlo sakusasa ekwabelwana ngalo kumgangatho wokuqala lineTV, imicrowave, itoaster, ifriji, umatshini weKeurig, itafile enezitulo ezi-4 kunye nesofa encinci. Amanzi amatsha okupholisa kunye nokutya kwesidlo sakusasa okwahlukileyo kuyabonelelwa. Igumbi lokuhlambela labucala kweli gumbi lisezantsi nje kwizinyuko.
Mhlawumbi ezona mbono zintle zeentaba unokuzifumana eCastleton. Eli gumbi ligumbi elithi "Mountain View".
4.95 · Izimvo eziyi-161
Ukuqubha kunye nokuhamba ngesikhephe eLake Bomoseen kusondele kakhulu kwaye ukukhwela ibhayisekile kwiindawo ezininzi ezintle kufikeleleka kanye ukusuka endlwini yam kunye neendlela zokuhamba intaba. I-Killington kunye ne-Okemo ski resorts ziyi-40 imizuzu yokuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Joseph
Rhoqo ndifumaneka ngalo naluphi na ulwazi iindwendwe zam eziya kuzifuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Castleton